Anchor: Yemahara, Nyore, Nhare-Inoshamwaridzika Podcasting | Martech Zone
Anchor: Yemahara, Nyore, Nhare-Inoshamwaridzika Podcasting
China, Kurume 29, 2018 NeChishanu, Kurume 30, 2018 Douglas Karr
ne chipingo, iwe unogona kuzarura zvizere, kugadzirisa, uye kugadzirisa yako podcast chaipo kubva pafoni yako kana desktop. Anchor yakasununguka zvachose kushandisa pasina miganho yekuchengetedza. Vashandisi vanogona kutora yavo yese odhiyo neiyo Anchor nhare mbozha kana kuisimudza kubva kune yako dashboard online
Sanganisa sezvikamu zvakawanda sezvaunoda muchikamu (semuenzaniso, rwiyo rwemusoro wenyaya, chiziviso, kubvunzurudzwa nemuenzi, uye nemimwe mameseji emuteereri), pasina kuita chero gadziriso yepamberi.
Anchor Zvimiro Zvinosanganisira:
Anchor Kubvunzana - inoita kuti iwe ugone kufona kunze.
Distribution - otomatiki govera yako podcast kune makuru podcast mapuratifomu (kusanganisira Apple Podcasts uye Google Play Music) nekungodzvanya kamwe chete.
Yakabatanidzwa Player - Kana iwe uchitova neyako blog kana webhusaiti, iwe unogona kupinza zviri nyore podcast yako ipapo kuti vanhu vateerere vasina kana kusiya yako saiti. Bata iyo yakadzikwa kodhi kubva kune yako mbiri mune Anchor nharembozha app kana kubva kune yako dashibhodhi ku anchor.fm.
Kuombera - Chero ani anoteerera podcast yako muAnchor anogona kuombera nguva dzavanofarira. Kuombera kunoramba kuripo, saka chero munhu anoteerera gare gare anozokwanisa (kuita sarudzo) kunzwa zvikamu zvakafarirwa nevamwe.
Audio Mhinduro - Vateereri vanogona kutumira mameseji ezwi mune yako show chero nguva. Vachave kusvika paminiti kuti vapindure, izvo zvinochengeta ako ese mameseji mapfupi uye anotapira.
Otomatiki Chinyorwa - Anchor inonyora odhiyo iyo yakaiswa kune Anchor (pasi pemaminitsi matatu).
Zvemagariro Mavhidhiyo - paunoda kusimudzira podcast yako pasocial media, Anchor inogadzira yehupenyu, yakanyorwa vhidhiyo mune akanakisa mafomati epuratifomu yega yega. Vanotsigira square ye Instagram, nzvimbo yeTwitter neFacebook, uye mufananidzo weNhau.
Podcast Analytics - NeAnchor, unogona kuona zvinhu zvakaita semitambo yako nekufamba kwenguva, kuti zvikamu zvinomira sei kune mumwe nemumwe, uye ndeapi maapplication ari kushandiswa nevanhu kuteerera. Kana vateereri vako vari kushandisa Anchor app, unogona kunyange kuona kuti ndiani akanzwa chikamu chimwe nechimwe, uye kwavakarumbidza kana kutaura.
Tanga Podcast Yako
Tags: chipingoanchor 3.0anchor mafichaanchor.fmpodcastingpodcasting app
Freshworks: Multiple Shanduko Rate Optimization MaModule mune Imwe Suite